Adoption Marketing, taktika ary valiny amin'ny marketing amin'ny 2014 | Martech Zone
Namoaka ny State of Content Marketing avy any Eloqua, ny Fanjakan'ny marketing amin'ny atiny 2014, ary Fironana momba ny marketing amin'ny atiny 2014… Manomboka mahita lohahevitra amin'ity taona ity ve ianao?
izany infographic avy any Uberflip maneho ny toetran'ny marketing amin'ny atiny ankehitriny eo amin'ireo orinasa B2B sy B2C. Inona ny tetika tian'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao? Hitan'izy ireo ve ny valiny antenainy? Hanao ahoana ny ho avy? Zahao hahitanao azy!
Ity infographic ity dia mandray fomba hafa kely, mifantoka kokoa amin'ireo mpitantana amin'ny orinasa. Ity infographic ity dia manome ny porofo, dingana tsotra ary ny fandrefesana ny valin'ny marketing amin'ny atiny. Araka ny infographic, araka ny referansa ny Beginnner's Guide to Content Marketing infographic avy amin'ny Demand Metric, ny marketing amin'ny atiny dia mitentina 62% latsaka noho ny endrika marketing nentin-drazana sy ny 78% ny CMO mihevitra fa ny marketing votoaty no ho avin'ny marketing araky ny Content Marketing Institute.
Tags: Ann Handleybilaogy Lahatsoratratranga fanadihadianamarketing amin'ny atiny 2014fananganana marketing amin'ny atinyContent Marketing Institutevaliny marketing atinymarketing marketing atiny roitetika marketing amin'ny atinyContentlyCustomerspaikadin'ny famoahanaheidi cohenahoana noJoe Pulizzipejy pejyLeadsMarketing Infographicsmarketingprofsmandrefy votoaty marketingNewslettersgazety an-gazetyfanantenanafifandraisana amin'ny vahoakaoram-panalahaino aman-jery sosialyfanjakan'ny marketing amin'ny atinyvarotra nentim-paharazanafifamoivoizanauberfliphoronan-tsaryWebinarsmanolotra whitepapers